Kutheni iBing iphumelela uPhando lweVidiyo kuGoogle | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 13, 2009 NgeCawa, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
UGoogle usenokuba uhlawula kancinci kakhulu kwisicatshulwa. Jonga umahluko omkhulu phakathi kwe- Iziphumo zophando lwevidiyo zikaGoogle kwaye Iziphumo zophando zeBing. Andihlali ndinika iMicrosoft ngetyala kwisebe lokusebenziseka- kodwa bayikhonkxa le!
Iziphumo zoPhando lwevidiyo kaGoogle
Iziphumo zePhando zeBing
Umdlali weVidiyo ye-Bing
Nalu uthotho lweempawu eziphambili zoPhando lweVidiyo ye-Bing kuKhangelo lweVidiyo kuGoogle:
Xa ulungisa imouse kwi-Bing, ividiyo idlala ngesandi. UGoogle ukuvumela ukuba utsibe umxholo - kodwa emva kokucofa ukudlala ividiyo kujongano lwabo.
I-Bing ibonelela ngemiboniso bhanyabhanya yokwenyani kuneGoogle-oxhomekeke kwisicatshulwa ngokungeyomfuneko. Ividiyo yindawo yokubonakalayo, i-Bing ivumela ukuba kube yinto ephambili. Unokwenza imouse ngaphezulu kwesihloko kwi-Bing ukufumana isihloko esipheleleyo ukuba siklinyiwe.
Xa udlala ividiyo kwi-Bing, iphantse ibe nobungakanani bephepha… kumnandi- ngakumbi umxholo omtsha, wenkcazo ephezulu. Ezinye iividiyo zidweliswe ngezantsi kwaye zisenokuzidlala ngokwazo xa ubeka imouse phezu kwazo.
Ukunciphisa ukhetho lwakho lokukhangela lulula kwaye lunomdla kwicala lasekhohlo kwi-Bing. UGoogle ufuna ukuba ucofe uPhando lweVidiyo oluPhambili ukuze ufike kukhetho olufanayo lokucoca.
UGoogle akenzi awona maphepha amnandi okanye amahle, kodwa iphepha labo lokuPhononongwa kweVidiyo ngokuqinisekileyo alilawuleki kwaye libi. Ngokoluvo lwam, iBing yenze umsebenzi omangalisayo wokubeka iphepha kunye nokwenza ukuba isebenziseke ngakumbi. Ukukhangela ividiyo kunzima-kwaye ii-algorithms azizizo ezona zikhulu… uhlala unyanzelekile ukuba ungqubeke kakhulu. Ujongano lweBing kunye nokusebenziseka kwayo kwenza ukuba kube lula ukukhangela, ukukhangela kunye nokufumana ividiyo oyikhangelayo.
tags: unxantathuadalvib2b ezinye iindlelaimvuXNUMXsomngcai-spsullivan